Akụkọ - Ọdịiche na uru nke capsules akwụkwọ nri na capsules gelatin
Ọdịiche na uru nke capsules akwụkwọ nri na capsules gelatin
A na -ekewa capsules siri ike na capsules gelatin na capsules akwụkwọ nri dị ka akụrụngwa dị iche iche si dị. Gelatin capsules bụ capsules nwere akụkụ abụọ kacha ewu ewu ugbu a n'ụwa. Isi ihe mejupụtara bụ gelatin ọgwụ dị elu. A na-eme capsules akwukwo nri site na cellulose akwukwo nri ma ọ bụ polysaccharides nwere mmiri. Capsule oghere nke ejiri akụrụngwa na -ejigide uru niile nke capsule oghere oghere. Ha abụọ nwere ihe dị iche na akụrụngwa, ọnọdụ nchekwa, usoro nrụpụta na njirimara.
nhazi ọkwa capsule
A na -ekekarị capsules na capsules siri ike na capsules dị nro. Capsules siri ike, nke a makwaara dị ka capsules oghere, nwere akụkụ abụọ nke ahụ okpu; A na-eji capsules dị nro na ngwaahịa nwere ihe na-akpụ ihe nkiri na ọdịnaya n'otu oge. A na -ekewa capsules siri ike na capsules gelatin na capsules akwụkwọ nri dị ka akụrụngwa dị iche iche si dị. Gelatin capsules bụ capsules nwere akụkụ abụọ kacha ewu ewu ugbu a n'ụwa. Ihe mejupụtara capsule ahụ bụ shei capsule abụọ a rụrụ nke ọma. Ogo nke capsules dị iche iche, capsules nwekwara ike acha ma bipụta ya iji gosipụta ọdịdị ahaziri iche. Capsules nke osisi bụ capsules oghere nke cellulose osisi ma ọ bụ polysaccharides nwere mmiri dị ka akụrụngwa. Ọ na -ejigide uru niile nke capsules nwere oghere: ọ dị mma ịrara, dị irè n'izobe ụtọ na isi, na ọdịnaya ya na -apụta ìhè ma na -ahụ anya.
Kedu ihe dị iche n'etiti capsules gelatin na capsules akwukwo nri
1. Ngwa nke gelatin capsules na capsules akwukwo nri di iche
Akụkụ bụ isi nke capsule gelatin bụ gelatin ọgwụ dị elu. Collagen dị na akpụkpọ ahụ, akwara na ọkpụkpụ anụ sitere na gelatin bụ protein nke a na-esi na collagen dị na anụ njikọ njikọ anụ ma ọ bụ anụ epidermal; Akụkụ bụ isi nke capsule akwụkwọ nri bụ hydroxypropyl ọgwụ. HPMC bụ 2-hydroxypropyl methyl cellulose. Cellulose bụ polymer eke sitere n'okike. A na -emekarị HPMC site na akwa akwa ma ọ bụ pulp osisi site na etherification.
2, ọnọdụ nchekwa nke capsules gelatin na capsules akwụkwọ nri dị iche
N'ihe banyere ọnọdụ nchekwa, mgbe ọtụtụ ule gasịrị, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara imebi n'okpuru ọnọdụ iru mmiri dị ala, na ihe nke shei capsule ka kwụ chịm n'okpuru oke okpomoku na iru mmiri, yana ndepụta dị iche iche nke capsules osisi n'okpuru ọnọdụ nchekwa oke. emetụtaghị ya. Capsules Gelatin dị mfe ịrapara na capsules n'okpuru ọnọdụ iru mmiri dị elu, na -esi ike ma ọ bụ na -emebi emebi n'okpuru ọnọdụ iru mmiri dị ala, ma dabere na ọnọdụ okpomọkụ, iru mmiri na ihe nkwakọ ngwaahịa nke gburugburu ebe nchekwa.
3, usoro mmepụta nke capsules gelatin na capsules akwụkwọ nri dị iche
A na -eme osisi hydroxypropyl methylcellulose n'ime shei capsule, ma ọ ka nwere echiche ebumpụta ụwa. Akụkụ bụ isi nke capsules nwere oghere bụ protein, yabụ ọ dị mfe ịmụpụta nje na microorganisms. Ekwesịrị ịgbakwunye ndị na -echekwa ihe n'oge usoro nrụpụta, ekwesịrị iji ọgwụ ethylene oxide gwọọ ọgwụ tupu nkwakọ ngwaahịa iji hụ na akara akara microbial nke capsules. Usoro mmepụta mkpụrụ osisi capsule adịghị mkpa ịgbakwunye ihe nchekwa ọ bụla, ọ dịghịkwa mkpa ka ọ gbaa ọgwụ mgbochi, nke na -edozi nsogbu nke ihe fọdụrụ na nchekwa.
4, njirimara nke capsules gelatin na capsules akwukwo nri di iche
Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere capsules gelatin oghere, capsules akwukwo nri nwere uru nke mmegharị nke obosara, enweghị ihe ize ndụ nke mmeghachi omume njikọta na nkwụsi ike dị elu. Ọnụ mwepụta ọgwụ akwụsighị ike, na ndịiche dị n'otu. Mgbe ọ gbasasịrị na ahụ mmadụ, ọ naghị etinye uche ya na enwere ike ịpụpụ ya. Ewepụrụ ya n'ahụ.
Oge ezipụ: Jun-16-2021